KAALINTA TURKIGA EE SOMAALIA | Latest News	Wednesday, June 19th, 2013	Home
KAALINTA TURKIGA EE SOMAALIA
Jun 1, 2012 - jawaab	Aqrisatay:470Bishii February, Raiisul Wasaaraha Britain, David Cameron, waxaa shirkii caalamiga ahaa ee arrimaha Somalia ee ka dhacay London uu ku tilmaamey “kii ugu balaaraa oo qeybo miisaankooda uu culus yahay ay ka qeyb galaan”.
Walow dadka magaca leh ee ka qeybglaya shirka Istanbul ay ka yar yihiin kuwii ka qeybgaley shirkii London, ayaa hadana waxaa jirra rajo aad u sareysa oo ah in natiijo wanaagsan oo mushkiladda Somalia lagu xaliyo ay soo baxdo.
Taana waxaa ugu wacan waddanka martigelinaya shirkan ee Turkiga oo horkacaya dadaal caalami ah oo nabad iyo xasilooni loogu soo celinayo Somalia, kaas oo si weyn uga duwan hababkii horey loo adeegsan jirey.
Qoraa iyo faalo qore Turkisha ah oo magaciisa la yiraahdo Dr Suleyman Gunduz ayaa sheegey inuu natiijo kuwii hore ka duwan ka filayo shirka Istanbul, waayo si ka duwan dalalka kale, Turkigu waxaa uu la imanayaa aragti iyo dadaal gaar ah , kadibna dalalka kale ayuu ku casuumayaa inay gacan ka geytstaan fulinta fikirkaasi.
Booqashadii taariikhiga ahayd ee Raiisul Wasaaraha Turkiga ku tegey Somalia ka sokow, waxaa dalkaasi uu martigeliyey shir ka dhacay Istanbul sannadkii 2011kii, kadibna 2011, waxaa jirey shir degdeg ah oo Ururka SHirweynaha Islaamka uu ka yeeshey kalmo la gaarsiiyo Somalia, kaas oo isna ka dhacaya Turkiga.
Shirkadaha Turkiga waxay Somalia ka fulinayaan mashruucyo horumarineed, sida dhismaha waddooyinka, qashin uruurinta iyo hoy loo sameynayo dadka soo barakacay.
Wasiirka Arrimaha D?bedda ee Turkiga, Ahmet Davutoglu , waxaa uu sheegey in dunida inteeda kale ay Somalia meel dibedda ah ka eeganayeen, kadibna ey shirar ku qabtaan caasimado dibedda ku yaala, balse dhankooda ay qaadeen talaabo taa ka duwan oo ah inay gudaha Somalia u diraan shirkadahooda kala duwan, si aan u muujino inaan iskaashi iyo wadashaqeyn dhab ah la yeelano Soomaalida.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Ban ki-Moon waxaa uu uga mahad celiyey dowladda Turkiga, martigelinta shirkan labaad ee caalamiga ee arrimaha Somalia, waxaana uu Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey uu ka dalbadey inuu taageero dhaqangelinta war murtiyeedkii ka soo baxaya shirkii London. Ban ki-Moon oo dhanka kale wax ka guddoomin doona shirka Istanbul, waxaa uu sheegey in dariishad cusub oo fursad u ah nabadda iyo xasiloonida Somalia ay furantey.
Waxaana uu dhamaan dhinacyada ay arintan quseyso ku booriyey inay yeeshaan hadaf mid ah oo degdeg looga mira dhalinayo shirkan. Xilli siyaasadeedka ku meel gaarka ee Somalia waxaa uu ku eg yahay bisha August ee sannadkan 2012ka, waxaana hoggaamiyeyaasha dalka looga fadhiyaa in iyagoo ka duulaya shirkii London ay dalka u sameeyeen qorshe dalka looga hirgelinayo hanaan siyaasadee, amni iyo horumarin, ayna ku jirto dhismaha dowlad rasmi ah oo dalku yeesho.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey waxaa uu sheegey inaaney jiri doonin muddo kordhin kale oo loo sameeyo hay’adaha ku meel gaarka ee Somalia. Dhowaan, Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Turkiga ayaa sheegtey inay si buuxda u taageereyso natiijooyinka shirarkii kala duwanaa ee arrimaha Somalia ee ka dhacay Kampala, Garowe, Gaalkacyo iyo kii ka dhacay Addis Ababa, kuwaas oo dhamaan loogu talagaley xal in loogu raadiyo mushkiladda Somalia.
Turkiga waxa auu doonayaa inuu adeegsado hanaan loo wada dhan yahay oo dhamaan qeybaha kala duwan ee Somalia ka qeyb qaataan, si taasi gundhig ugu noqoto abuurista hanaan nabadeed oo Soomaalida gacantooda ku jira. Inta badan shirarkii hore u dhici jirey, waxaa natiijooyinka ka soo baxa ay ahaan jireen kuwo Soomaalida loogu yeerinayo waxa ay tahay inay qabtaan. Balse Turkiga waxaa u qorsheysan in shirka Istanbul uu noqdo mid ay ka soo baxaan fursado dhiirigelinaya in dhinacyada is haysta ay wada hadlaan.
Waxaan iyana meesha ka marneyn dano dhaqaale oo Turkiga uu ka leeyahay Somalia. Ertu?rul Apakan, Wakiilka Joogtada ee Turkiga u fadhiya Qaramada Midoobey, waxaa uu xaflad casho ah oo ay ka soo qeybgaleen Somali iyo Turkish ka sheegey in shirka Istanbul ujeeddada lga leeyahay ay tahay in xasilooni waarta looga abuuro Somalia, iyo weliba waxa laga yeelayo horumarinta hay’adaha dhaqaalaha iyo ganacsiga.
Su’aal kama taagna in Africa ay tahay qaarad ay fursado badan ka jiraan, Turkigana uu ka mid yahay dalalka doonaya inay fursadahaas ka faaideystaan. Turkiga oo ah dalka 16aad ee ugu dhaqaale wanaagsan dunida, waxaa Afrika si xooggan ugula tartamaya dalalka Shiinaha iyo India.
W/D/ cabbdulqadir cabdulahi maxamuud zuzu
XAFIISKA SOUTH SUDAAN